DAAWO: Difaacayada Juventus ee Chiellini Iyo Leonardo Bonucci Oo Si Saaxiibtinimo Leh Ugu Dagaalamay Maaliyada Lionel Messi, Iyo Colaadii Luis Suarez & Giorgio Chiellini Oo Soo Dhamaatay. - Laacib.net
DAAWO: Difaacayada Juventus ee Chiellini Iyo Leonardo Bonucci Oo Si Saaxiibtinimo Leh Ugu Dagaalamay Maaliyada Lionel Messi, Iyo Colaadii Luis Suarez & Giorgio Chiellini Oo Soo Dhamaatay.
Lionel Messi iyo kooxdiisa Barcelona ayay u ahayd habeen murugo badan kadib markii ay awoodi waayeen in ay dhinaca kale u dhigaan natiijadii Turin ee ay Juventus 3:0 ugu soo garaacday, waxayna Barcelona barbar gool la’aan ah Camp Nou kula gaashay Juventus oo ka mid noqotay afarta kooxood ee xili ciyaareedkan ku dagaalami doono koobka Champions Leaque-ga.
Laakiin inkasta oo uu Messi xaalad xun ku jiray haddana labada difaac ee kooxda Juventus ee Leonardo Bonucci iyo Chiellini ayaa isku qabsaday maaliyada ama garanka Lionel Messi. Leonardo Bonucci ayaa Lionel Messi waydiistay in uu u badalo maaliyadiisa, wuxuuna Messi u soo joogsaday hadalka Bonuucci.
laakiin waxaa arinta soo dhex galay Chiellini kaas oo saaxiibkiisa Juventus dhirbaaxay isaga oo diidanaa in uu uga horeeyay waydiisaga Messi ee maaliyadiisa. Markii garoonka laga soo baxay Leonardo Bonucci ayaa farxadiisa banaanka soo dhigay wuxuuna sheegay in uu ku faraxsan yahay in waxyaabaha xusuusta leh ee uu urursaday uu ku soo darsaday maaliyada Lionel Messi.
Leonardo Bonucci ayaa yidhi: ‘Waxaan ku faraxsanaa in aan helay maaliyada ciyaartoyga aduunka ugu fiican, sidaa daraadeed kaliya aniga waxay ii ahayd waqti fiican in aanu ku soo darsaday waxyaabaha shaqsiga ah ee aan urursaday”. Halkan ka daawo muuqaalka.
Dhinaca kale markii uu Giorgio Chiellini waayay maaliyada Lionel Messi ayay kulmeen Luis Suarez oo ay dhacdadii koobka aduunku soo kala dhex martay laakiin waqtiga ayaa wax daweeya waxayna si buuxda iskaga ilaaween wixii Brazil ku soo kala dhex maray ee uu Suarez afarta bilood ee ganaaxa ah garoomada kaga maqnaa markii ay FIFA ku garaacday in uu Giorgio Chiellini qaniinay.
Giorgio Chiellini iyo Luis Suarez ayaa markooda kala badashay garmaanta waxayna si saaxiibtinimo leh ukal qaateen maaliyadii ay kulankan ku ciyaareen iyada oo Lionel Messi uu isku fiirinayay waxa dhex marayay Giorgio Chiellini iyo Luis Suarez oo uu taatiikhdooda ogaa.